जापानमा नोभेम्बर! सबै भन्दा राम्रो र आरामदायक पर्यटन मौसम! - Best of Japan
क्योटो, जापान किओमिजु-डेरा मन्दिर शरद seasonतुको मौसममा = शटरस्टक
मलाई लाग्छ कि नोभेम्बर जापानको वरिपरि घुम्नका लागि उत्तम मौसम हो। तपाईं टोकियो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा जस्ता प्रमुख शहरहरूमा सुंदर शरद leavesतु पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मन्दिर र मन्दिरहरूमा अचम्मको दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी मध्य नोभेम्बर देखि ढिलोसम्म, मलाई लाग्छ कि यो केवल रूखहरूसहितको सडक र पार्कको साथ हिंड्नु रमाईलो छ। यद्यपि यो उत्तम मौसम हो किनकि सबैतिर पर्यटकहरू बसिरहेका छन्। यो उत्तम छ कि दिमागमा तपाइँको यात्रा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न राम्रो हुनेछ। यस पृष्ठमा, म उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु जब तपाईं नोभेम्बरमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ।
नोभेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को जानकारी
नोभेम्बरमा जापानका प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरू जताततै भीडले भरिन्छन्
शहरी पदयात्रा र पार्कहरूमा पनि शरद पातहरू सुन्दर छन्
यदि तपाईं नोभेम्बरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र अधिक जानकारी हेर्न जानुहोस्।
गोधूलि शहरको मध्य भागमा व्यस्त सडकको विशिष्ट दृश्य। नोभेम्बर,, २०१ Ky क्योटो, जापान = शटरस्टक
नोभेम्बरमा, क्योटो र नारामा मन्दिर र मन्दिरहरू शरद leavesतु पातहरूले घेरेका छन् र चित्रकलाको संसार जत्तिकै सुन्दर बन्छन्। नोभेम्बरमा जापानको मौसम देशव्यापी रूपमा स्थिर छ र त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्। हावा गर्मी जस्तो ओसिलो छैन, र तपाई आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। नोभेम्बर केवल दर्शनीय स्थलहरूको उत्तम मौसम हो।
दुबै घरेलु पर्यटक र विदेशी पर्यटक नोभेम्बरमा धेरै असंख्य छन्। तसर्थ, यदि तपाइँ यस पटक जापानको यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि यहाँ र त्यहाँ होटेल रिजर्भेसन प्राप्त गर्न कष्टदायी हुनेछ।
टोकियो र ओसाकामा त्यहाँ थुप्रै सबवे छन् त्यसैले तपाईं ट्राफिक भीडको सामना नगरी शहर वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि क्योटो शहरमा त्यहाँ केही सबवेहरू छन्, त्यसकारण दर्शनीय स्थलहरूमा जानको लागि तपाईंले अक्सर बस वा ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्दछ। यस कारणका लागि, क्योटोमा तपाईले अनिवार्य रूपमा ट्राफिक जामको सामना गर्नुपर्नेछ।
क्योटोमा, विशेष गरी प्रख्यात दर्शनीय स्थलहरू जस्तै किन्काकुजी मन्दिर, त्यहाँ त्यस्तो समयहरू हुन्छ जब तपाईंले प्रवेश गर्न पर्याप्त लाइन अप गर्नु पर्छ। तपाईं ट्राफिक जामबाट थकित हुनुहुन्छ र तपाईं यात्रा स्थलहरूमा भीडबाट थकित हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं साना बच्चाहरूको साथ यात्रा गर्नुहुन्छ र ट्राफिक जामको सामना गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईंलाई कठिन हुनेछ।
मलाई जापानमा नराम्रो नहोस् भनेर म यी कुराहरुमा जोड दिन हिम्मत गर्दछु। जे होस्, यदि तपाईंले माथिको कुरा राम्ररी बुझ्नुभयो र भीडको सामना गर्नुभएन भने, तपाईं एकदम राम्रो यात्राको अनुभव गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
कृपया जतिसक्दो चाँडो होटल रिजर्भेसन गर्नुहोस् ताकि तपाईं भीडले आफ्नो यात्रालाई बिगार्नुहुन्न। यदि तपाईं जान चाहानु भएको मुख्य दर्शनीय स्थलको नजिक होटेल रिजर्भ गर्नुहोस् भने, तपाईं यात्राको समयमा भीडमा फस्ने सम्भावना कम हुन्छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं कियोटो मा Gion, Yasaka Shrine आदि वरिपरि यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ, म तपाईंलाई क्योटो स्टेशन नजिकको एक होटल भन्दा पहिले Gion वरपर एक होटल बुक गर्न सिफारिस गर्दछु।
जुन दिन तपाईं प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलहरूमा जानुहुन्छ, कृपया बिहान जतिसक्दो चाँडो होटल छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलहरू सामान्य रूपमा दिउँसो बढी र अधिक भीड। यदि तपाईं बिहान प्रख्यात दर्शनीय स्थलहरूमा जानुहुन्छ र दिउँसो केही पर्यटकहरूको साथ भ्रमण स्थलहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईं अपेक्षाकृत शान्त यात्राको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
पर्यटन स्थलहरू कुशलतापूर्वक यात्रा गर्न, यो पनि सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं ट्याक्सी लिनुहोस् जुन स्थानीय यातायात अवस्था र चालसँग परिचित छ। दर्शनीय बस भ्रमण गर्नु पनि राम्रो विचार हो। कृपया तपाईंको यात्रा योजना बनाउनुहोस् र रमाईलो यात्रा गर्नुहोस्!
Shinjuku GYoen पार्क, टोक्यो, जापानशुटरस्टकमा स्वत:
नोभेम्बर २०१:: मेजी-जिंगु-गायेन यसको सुन्दर शरद leavesतुका पातहरू = शटरस्टकका लागि सबैभन्दा प्रसिद्ध स्थानहरू मध्ये एक हो।
नोभेम्बरमा शरद leavesतुका पातहरू जापानमा जताततै सुन्दर हुन्छन्। यदि तपाईं शरद leavesतुका पातहरूका स्थानीय दृश्यहरूमा जान सक्नुहुन्न भने पनि तपाईं टोकियो र ओसाका र अन्य शहरहरूमा शरद leavesतुका पातहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाई शहरमा शरद पातहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया रूखको छेउमा भएको सडक वा पार्क खोज्नुहोस्। टोक्योमा, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं शिन्जुकु ग्योएन, मेजी जिingu्गु, ओमोट्सान्डो, अओयामा आदिमा जानुहोस्। माथिको चित्रमा देखाइएको छ। म तपाईंलाई एक अद्भुत यात्रा को लागी शुभकामना!
"जापानी शरद enjoyतु कसरी रमाउने" मा फिर्ता
जापानमा सेप्टेम्बर: टाइफुनबाट सावधान! शरद graduallyतु बिस्तारै आउँछ